Capital Live News | अनौठो जातको बाख्रा, जुन फल खान रुखमा चढ्ने गर्छन्
बिहिबार ०६, कार्तिक २०७७ ०५:४०
बाख्रा पाल्ने किसानले मल बेचेरै करोडौँ कमाउने
बिहिबार, ०८ असोज २०७७ Capital Live News
तस्विर: मोरक्कोमा पाइने बाख्रा
एजेन्सी, असोज ०८​।
हामिले रुखमा बाँदर, लोखर्के, चितुवा चढेको देखेका र सुनेका छौं । तर के तपाइले बाख्रा रुखमा चढेको सुन्नुभएको छ । हामिलाई थाहाँ छ ? बाख्रा जमिनमा मात्र दौडन र हिड्न सक्छ ।
तपाईलाई पत्यार नलाग्ला ! तर यस्तो बाख्रा पनि हुन्छ, जुन रुखमा चढ्न सक्छ । रुखमा चढ्ने यो अनौठो बाख्राको जाति अफ्रिकी देश मोरक्कोमा पाइने गर्छ । यी बिशेष जातिका बाख्राले रुखमा चढेर नै फलहरु खाने गर्छन् । भोक लागेमा बाख्राहरु रुखमा चढेर भोक मेटाउने गर्छन् । तपाईलाई थाहाँ छ यो बाख्राको मल अर्थात बड्कौँला निकै महँगो हुन्छ ।